လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခံရသူနှင့်လိင်မဆက်ဆံခံရသူအထီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများအကြားခြားနားချက်များ: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုများ (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
J ကိုကလေးသူငယ်လိင်အလွဲသုံးမှု။ 2011 Jan;20(1):77-93. doi: 10.1080/10538712.2011.541010.
Burton DL1, တာဝန် KJ, Leibowitz GS.
ဒီလေ့လာမှုကလိင်သားကောင်နှင့် nonsexually variable တွေကိုအတော်များများအပေါ်အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုသားကောင်နှိုင်းယှဉ်။ self-အစီရင်ခံစာအစီအမံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်အစီရင်ခံ 325% သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းခြောက်လူနေအိမ်အဆောက်အဦးများအတွက် 16 အထီးလိင်ကြမ်းတမ်းလူငယ် (ပျှမ်းမျှအသက် 55) မှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ T ကသူရလဒ်များကိုထက်လိင်သားကောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents (စိတ်ဒဏ်ရာ, မိသားစုဝိသေသလက္ခဏာများ, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစောစောထိတွေ့မှု) နှင့်မကြာသေးမီကအပြုအမူအခက်အခဲများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, လိင်စိတ်နိုးထ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် nonsexual ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ) ရှိသည်ညွှန်ပြ အဆိုပါ nonsexually သားကောင်အုပ်စုသည်။ ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်နှင့်မျိုးကွဲအဖွဲ့ဝင်များအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ရာမကြာသေးမီ typological သုတေသနနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။ ကုသမှု, သုတေသနနှင့်သီအိုရီသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Doi: 10.1080 / 10538712.2011.541010